Sidekick: Nchọgharị weebụ maka Ahụmịhe Ọrụ Ọrụ Ka Mma | Site na Linux
Sidekick: Ihe nchọgharị weebụ maka ahụmịhe ọrụ ntanetị ka mma
Sidekick: Ihe nchọgharị weebụ maka ahụmịhe ọrụ ntanetị ka mma.
Dị ka anyị maraworị nke ọma, anyị niile ndị na-eji kọmputa ugboro ugboro, Nchọgharị weebụ nwere ike mfe atụle ngwa kachasị eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọ bụla Usoro njikwa dị mkpa. Na-esote nke a n'ezie, Office Suites, na Ihe nchọgharị faịlụ (faịlụ) na Ngwa Izi ozi ozugbo.
Maka nke a, anyị na - etinyekarị ihe nchọgharị websaịtị ọ bụla, ma ọ dị ọhụụ ma ọ bụ n'ihi mmelite ewepụtara. Na akwukwo nke ugbu a, obu uzo nke Sidekick, ihe nchọgharị weebụ na-adọrọ mmasị nke na-ekwe nkwa ọnọdụ dị ọsọ na nke ọma maka mma na ntanetị na ahụmịhe ọrụ.
Tupu ị banye n'okwu ahụ, buru n'uche na ewezuga ihe ọhụrụ a Sidekick ihe nchọgharị weebụ, enwere otutu otutu ndi ozo ma obu na obughi, nke puru ibu Desktọpụ (GUI) ma ọ bụ ọnụ (CLI), na ha nwere dị iche iche Uru ọghọm dị na ya na akụkụ dị iche iche nwere ike ịba uru maka iche iche ụdị ndị ọrụ / mkpa, dị ka:
Nwa wolf efu
SRWare Ihe Nchọgharị Iron
Ndị a bụ ndị a kacha mara amara na ndị kachasị mkpa, yabụ enwere ọtụtụ ndị ọzọ na ndị ọhụrụ ga-aga n'ihu na-apụta n'oge. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ha, anyị ga-enwerịrị gara aga post Ọ dị mma n'ọtụtụ n'ime ha ka anyị na-agba gị ume ka ị chọọ ma gụọ, dị ka ndị a:
1 Sidekick: Ihe nchọgharị weebụ nke lekwasịrị anya n'ịntanetị
1.1 Gịnị bụ Sidekick Web Nchọgharị?
1.2 Nwụnye Sidekick na nhazi
Sidekick: Ihe nchọgharị weebụ nke lekwasịrị anya n'ịntanetị
Gịnị bụ Sidekick Web Nchọgharị?
"Sidekick bụ usoro mgbanwe nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke na-adabere na ihe nchọgharị Chromium. Ezubere ka ọ bụrụ ahụmịhe ọrụ kachasị n'ịntanetị, ọ na-eweta ndị otu gị na ngwa ọrụ weebụ ọ bụla ị na-eji ọnụ niile n'otu interface."
Maka nke ahụ, kwere nkwa belata ma ọ bụ kpochapụ oke ojiji nke taabụ taabụ ma ọ bụ windo ma ọ bụ ngwa desktọọpụ, nke na-anaghị ejikọta nke ọma na ọrụ ndị ọzọ kwa ụbọchị nke onye ọrụ ahụkarị, ọkachasị ndị emere n'ime ihe nchọgharị.
Ọzọkwa, Sidekick pụtara n'ihi atụmatụ ndị ahụ na-esonụ:
Trackers igbochi: Maka na ha enweghị ụdị azụmaahịa gbasoro mgbasa ozi, yabụ ha na-egbochi mgbasa ozi na ndị na-eso ụzọ na-enweghị nkwekọrịta.
Ai dabeere na adịghị mma nkwusioru: N'ihi na ọ na-azọpụta ihe dị mkpa na ebe nchekwa, na-akpaghị aka na-egbochi taabụ nke onye ọrụ adịghị mkpa n'oge ụfọdụ.
Mee ka njikwa taabụ dịwanye mma: N'ihi na ọ na-eji budata obere ebe nchekwa mgbe na-arụ ọrụ na yiri taabụ.
Nwụnye Sidekick na nhazi
Mgbe nbudata ya, si gị ukara download ngalaba, na n'ime usoro ".deb", n'ihi na m akpan akpan ikpe, ebe ọ bụ na, m na-eji MX Linux 19M ga-etinye ya na folda ahụ "Budata" iji iwu na-esonụ:
Ma mgbe ahụ i nwere ike imeghe ya, nke na-egosi ihe ndị a ntọlite ​​usoro gaba n'ihu iji wuchaa usoro nhazi niile:
Na nchịkọta, na dịka a pụrụ ịhụ, ọ bụ ngwa akpali mmasị dabere na Chọmium, ma mepụta iji nye ahụmịhe ka mma na ọsọ ọsọ mgbe ị na - arụ ọrụ na Nchọgharị weebụ. N'okwu m, mezue nhazi ahụ site na iji koodu natara site na email kama ịbanye na ya ozugbo. Ọ dịkwa m ka ezi uche gị na ebe nchekwa oriri (2,9% nke RAM m na 5.2% nke Firefox) yana ọmarịcha ma dịkwa mma Ejiri Webapps Opera, nke ahụ bụ, na akụkụ aka ekpe.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ihe nchọgharị weebụ na-akpọ «Sidekick» nke ahụ na-ekwe nkwa ebe dị ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma maka ịntanetị na arụmọrụ ọrụ ka mma; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Sidekick: Ihe nchọgharị weebụ maka ahụmịhe ọrụ ntanetị ka mma
M abanyela na SIdekick peeji nke ọ na-adịghị ka free software, ọbụna na-emeghe isi iyi ...
Ọ dị mma na ọ bụ ọrụ azụmaahịa yana na a na-atụle ya ebe a, mana nkọwa ahụ kwesịrị ịkọwapụta n'isiokwu ahụ, gịnị ka ị chere?
Daalụ, Bertie. Daalụ maka okwu gị. Enwetaghị m ebe ọ bụla na weebụsaịtị gị okwu "Free Software na Open Source", agbanyeghị, echere m na Sidekick bụ kpam kpam ma ọ bụ akụkụ mepere emepe, ebe ọ dabere na Chromium, nke bụ Google ụdị mepere emepe Chrome
Diego (ọzọ) dijo
Na ịmalite iji ya chọrọ ndebanye aha ... anyị malitere mmalite dị njọ ma a bịa na nzuzo. Ọ bụrụ na anyị tinye ya na Blink "na-akpọ n'ụlọ" ịgwa Google banyere ihe anyị mere n'oge nnọkọ ahụ, na-enweghị njikwa enwere ike ma ọ bụ na ọ dịghị mfe site na onye ọrụ, ekwenyeghị m.
Oh, na ọrụ nke ibudata RAM nke taabụ ndị a na-ejighị, na-enweta ihe mgbakwunye dị mfe akpọrọ Tab Tab Discard:
Zaghachi Diego (ọzọ)
Daalụ, Diego. Daalụ maka okwu gị na onyinye dị mma sitere na ahụmịhe gị. Onwe m, m ka na-eji Firefox mgbe m nwesịrị ọtụtụ ihe nchọgharị.
Ihe nhazi RISC-V ohuru na ekwu na edeputara oru na watt